बर्ड फ्लू लागेका मानिसमध्ये ६० प्रतिशतको जान्छ ज्यान, कसरी बच्ने ? | Hamro Doctor News
काठमाडौं, ५ चैत । पछिल्ला दिनमा राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बर्ड फ्लूको संक्रमण फैलिएर लाखौं कुखुरा नष्ट गरिएको छ । बर्ड फ्लू लागेका कुखुरा नष्ट गर्दैमा यसको जोखिम घट्ने भन्ने हुँदैन । यसर्थ, बर्ड फ्लू सर्नसक्ने जोखिमका लागि सबैजना सुरुमै सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
बर्ड फ्लू पन्छीबाट पन्छीमा र पन्छीबाट मानिसमा भाइरसबाट लाग्ने महामारीजन्य सरुवा रोग हो ।
जसलाई एभिएन इन्फ्लुयन्जा पनि भनिन्छ । दाना वा पानीको माध्यमबाट उक्त भाइरस अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलेर धेरैको ज्यान लिन सक्छ । यसकारण बर्डफ्लूलाई प्राणघातक रोग पनि भनिन्छ ।
सबैभन्दा पहिला यो रोग सन् १९७८ मा पन्छीमा र सन् १९९७ मा मानिसमा देखिएको थियो । बर्डफ्लूको सङ्क्रमण भेटिएको विश्वको ६६ औँ मुलुकमा पर्छ, नेपाल ।
यसले थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र इन्डोनेसियामा विकराल अवस्था निम्त्याएको छ ।
नेपालमा २००९ मा पहिलो पटक झापामा बर्ड फ्लू देखिएको थियो । यसपछि पनि नेपालमा बर्डफ्लू रोग देखापरेको छ । खोकीको संक्रमण जस्तै हो, बर्डफ्लू ।
यसले कुखुरा तथा पंक्षीहरूमा विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ । बर्ड फ्लूको भाइरस कुखुराको मासु, प्वाँख, सिँगान, र्याल, सुली, दाना, अण्डा, अण्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेको बोरा आदिको सम्पर्कबाट सर्ने सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले जानकारी दिए ।
बर्ड फ्लू लागेको मान्छेलाई ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, छाति दुख्ने, खोकी लाग्ने, अफ्ट्यारो हुने, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने जस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् त्यसैगरी कुखुरामा कुनै पनि लक्षण विना धेरै चरा मर्ने, लरबराउने, सिउर, लोती र खुट्टा वैजनी रङ्गको हुने, अन्डा कमलो हुने, खान नखाने, पखाला लाग्ने, टाउको सुनिने, नाखबाट सिँगन झर्ने, खोक्ने लगायत हुन्छ ।
कुखुरा वा कुनै बिरामी चरासँग सङ्क्रमण भएको हो भने बिरामीको लक्षण हेर्ने र उपचारका लागि अस्पताल लैजानुपर्छ । यसैगरी, मरेका कुखुरालाई नाङ्गो हातले छुनु हुँदैन । खोरमा जाँदा माक्स र पञ्जा लगाएर जाने र फर्केपछि राम्ररी साबुनपानीले हात धुने गर्नुपर्छ । आफू बस्ने वरपर कुनै पनि पंक्षी मरेको देख्नेवित्तिकै सचेत हुने तर टिपरे फ्याक्नेतिर लाग्नुहुँदैन ।
आफ्ना बालबालिकालाई त्यस्ता पंक्षीहरुको छेउछाउमा जान पनि हुँदैन । कुखुरा तथा पंक्षीको मासु सकेसम्म नखाने खाने भएपनि मज्जाले धोएपछि राम्ररी पकाएर मात्रै खानुपर्छ ।
कुखुरा तथा पंक्षीहरु मरेको दखेमा तुरुन्तै सरकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुमा खबर गरिहाल्नुपर्छ ।
त्यस्तै, टोल छिमेकमा कुखुरा तथा पंक्षीहरु मरेको थाहा पाएमा वा शंका लागेमा माक्स लगाएर हिड्नुपर्छ ।
साथै पोल्टी फार्म वा घरमा पालिएका कुखुरामा र्याल, सिंगान काढ्ने, लोती सुन्निने, लोती र सिउर हरियो हुने, पखाला लाग्ने लक्षण देखापरी अप्रत्यासित रूपमा कुखुरा मर्न थाले भने चिकित्सकलाई खबर गरिहाल्नुपर्छ ।
डा पुनका अनुसार यो रोग मान्छेबाट मान्छेमा वा चराबाट मान्छेमा पनि सर्ने हुँदा आफूलाई रोग लागेको वा रोग लागेको शङ्का भएमा धेरै भीडभाड भएको ठाउँमा जानुहँुदैन ।
साथै चुम्मन गर्ने, अङ्कमाल गर्ने, आफूले लगाएको कपडा, गहना अरुलाई दिने जस्ता कार्य पनि गर्नुहुँदैन ।
बर्ड फ्लू लागेकामध्ये ६० प्रतिशतको जान्छ ज्यान उनका अनुसार बर्ड फ्लू लागेका मध्ये ६० प्रतिशत मानिस मर्ने गरेका छन् ।
उनले भने ‘पंक्षी, कुखुराबाट मानिसमा तत्काल सर्ने संभावना न्यून हुन्छ, तर बर्ड फ्लू लागिसकेको मानिसमध्ये ६० प्रतिशत भने मरेका छन्, यो भनेको धेरै हो, त्यसैले यस रोगबारे अति संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
रोगका लक्षण देखिए तत्काल उपचारका लागि अस्पताल जाने र डाक्टरको सल्लाह बमोजिम भाइरस विरुद्ध औषधि खाने डा पुनले सल्लाह दिए ।
बर्ड फ्लू सङ्क्रमणबाट बच्ने टामी फ्लू भन्ने औषधि दिने गरिन्छ । कुखुरामा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण थाहा पाउने पहिलो विधि, र्यापिड टेस्ट हो ।
उक्त टेस्टबाट ए समूहको भाइरस हो कि होइन पत्ता लगाएपछि मात्रै अर्को परीक्षणका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइन्छ, जहाँबाट एचफाईभ एनवान हो, होइन पत्ता लाग्छ ।
डा. पुनका अनुसार नेपालमा कडा खालका बर्ड फ्लू हालसम्म देखिएको छैन ।
उनले भने ‘ एफसेभेन एननाइन बर्ड फ्लू कडा खालको हो, यो बढी मात्रामा चाइनामा देखिएको छ, तर नेपालमा यस्ता कडा खालका बर्ड फ्लू देखिएको छैन, देखिएका बर्ड फ्लु समान्य ए समूहका भाइरसयुक्त कम जोखिमपूर्ण छन् ।’
Last modified on 2019-03-20 11:16:38